Atụmatụ sitere na saịtị ntụgharị dị elu | Martech Zone
Ọ dịghị ihe na-akụda mmụọ karịa ịnwe mgbasa ozi mgbasa ozi na-aga nke ọma nke na-ebugharị ọtụtụ okporo ụzọ na saịtị gị ma na-ebute ntụgharị dị ala. N'ụzọ dị mwute, ọtụtụ ndị na-ere ahịa dijitalụ enwetawo nke a, ihe ngwọta ya bụ otu: bulie saịtị gị site na iji ọdịnaya na-agbanwe agbanwe. N’ikpeazụ, ihe kacha sie ike bụ ịghara ịbata onye ahụ n’ọnụ ụzọ, ọ bụ ime ka ị bata n’ime.
Mgbe anyị na ọtụtụ narị saịtị rụọ ọrụ, anyị ahụla usoro na usoro ndị na-eduga n'ọdịdị ntụgharị dị elu. Mana, tupu ịbanye n'ime usoro na ihe a na-achọghị, ọ dị mkpa ịkọwapụta ihe anyị bu n'obi mgbe anyị kwuru akakabarede.
Ọnụego mgbanwe maka ndị ahịa Digital
Okwu a bu “ntughari” putara ihe. Ndị na-ere ahịa nwere ọtụtụ ụdị mgbanwe dị iche iche ha chọrọ ka ha debe. Ndị a bụ ụfọdụ n’ime ihe ndị kachasị mkpa maka ndị na-ere ahịa dijitalụ.
Vertụgharị ndị debanyere aha - O nwere ike isiri gị ike ikwere, mana ọ nwere ike ịdị mfe ịnweta ndị ọhụụ iji gaa na saịtị gị karịa ọnụọgụ ndị agbanwere.
nsogbu: Ndị mmadụ na-akpachara anya nyefee adreesị email ha n'ihi na ha achọghị ka spam.
Na-agbanwe ndị ọbịa na ndị na-azụ ahịa - ting nweta ndị ọbịa n’ezie ịkpalite ihe ma nyefee kaadị akwụmụgwọ ya bụ otu n’ime mgbanwe ndị siri ike iji nweta, ma site na iji ngwá ọrụ kwesịrị ekwesị, ụlọ ọrụ ndị maara ihe na-eme ya kwa ụbọchị.
nsogbu: Ọ gwụla ma ngwaahịa gị ọ bụ otu ụdị, o nwere ike ịbụ na ị nwere asọmpi, yabụ, ọ dị oke mkpa na ị ga-ahụ ahụmịhe ọpụpụ dịka o kwere mee, yabụ ndị mmadụ anaghị ada ada tupu ha emechaa ịzụta ahụ.
Na-agbanwe ndị ọbịa otu oge ka ha bụrụ ndị na-eguzosi ike n'ihe, ndị na-alọghachi - Iji mee ka ndị ahịa weghachite ọdịnaya gị, ọ dị mkpa ka ị nweta adreesị ozi-e ha maka nkwukọrịta na-aga n'ihu na nkwalite n'ọdịnihu.
nsogbu: Ndị ahịa anaghị eguzosi ike n’ihe dị ka ha na-emebu. Site na ọtụtụ nhọrọ dị na pịa bọtịnụ, ọ na-esiri ụlọ ọrụ ike ijide ha.
Ngwọta: Ọdịnaya na High Conversion Rates
Ọ bụghị olileanya niile na-efu. Iji mee ka ọnụego ntụgharị saịtị gị bawanye, anyị ejikọgo ọnụ ụzọ kacha aga nke ọma anyị hụgoro saịtị iji jiri ọnụego mgbanwe.
Pụrụ iche Pụrụ iche
Ọ bụghị onye ọ bụla ka ekere eke, ozi ekwesighi ịnata. N’ezie, ị maara na otu mbipụta magazin nwere ihe karịrị otu mkpuchi? Dabere na ebe i bi na-ekpebi mkpuchi ị na-ahụ.
Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ahịa eCommerce nwere ike ịhazi ozi ya dabere na ọtụtụ ihe gụnyere ihe ndị a:
Ọ bụrụ na onye ọbịa ahụ si California, nye 20% Gbanyụọ na uwe mmiri.
Ọ bụrụ na onye ọbịa enweghị ọrụ na peeji nke X maka sekọnd abụọ, wee gosipụta ozi na-ajụ ma onye ahụ chọrọ enyemaka.
Ọ bụrụ na ọ bụ nke mbụ onye ọbịa bịara na saịtị ahụ, gosi ha nyocha ga-enyere ha aka ịchọta ihe ha na-achọ.
Ọ bụrụ na onye ọbịa ahụ na-eji ngwaọrụ iOS, wee gosi ha popup na-eduzi ha ibudata ngwa na ụlọ ahịa iOS.
Ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ eleta saịtị gị n’etiti etiti ehihie na 4pm ma dị n’ime kilomita 50, nye ya onyinye dere maka nri ehihie.
Mmekọrịta mmekọrịta nwere oke mmekọrịta dị elu karịa ọdịnaya static doro anya, ya mere, iji usoro mmekọrịta ndị na-eduga ndị ọrụ ime ihe bụ ngwá ọrụ zuru oke maka ntụgharị ma ọ bụrụhaala na ị na-etinye oku na-aga ebe ọ bụla.
Quizzes na Ntuli aka
Ndị a dị mma maka ọtụtụ ebumnuche gụnyere: Jụọ ndị ọrụ ka ha nye adreesị email ha iji hụ nsonaazụ. Tinye ụdị ndu na njedebe na-ajụ ndị na-enyocha ajụjụ iji debanye aha maka ahaziri ahaziri nke ọma dabere na nsonaazụ pụrụ iche ha.
Ndị a na-enye ụlọ ọrụ ohere pụrụ iche iji nye nnabata na enyemaka 24/7. Ọ dịghịzi mkpa ịhapụ ịtụgharị mgbanwe n'ihi na ndị ọbịa enweghị ike ịchọta nkwado ma ọ bụ enyemaka dị mkpa. Jụọ ndị ọrụ ọhụụ ma ọ bụrụ na ha chọrọ enyemaka ịchọta ihe ọ bụla, wee jụọ ọtụtụ ajụjụ ga-enye gị ohere ịnye ndụmọdụ ndị ahaziri. Gbakwunye mpempe akwụkwọ ndu, na-enye onye ọbịa ohere ịhapụ ozi ha, ka ị nwee ike ịlaghachikwute ya ozugbo enwere ike.
Etu esi achọpụta ọnụọgụ mgbanwe saịtị gị
Gụkọta ọnụego ntọghata gị adịghị egwu dịka o nwere ike iyi. Ọ dị mfe yana mmemme nsuso dị ka Google Analytics. Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ị ga - achọ iji aka gị mee ya, enwere ngụkọta a maara nke ọma, nke a nwalere ma bụrụ eziokwu. Nke mbụ, ọ dị mkpa ka ị mara mmadụ ole gara leta na mmadụ ole gbanwere. Naanị ịkekọrịta ọnụọgụ ndị gbanwere site na ngụkọta ndị ọbịa webụsaịtị, wee mezie nsonaazụ ya site na 100.
Ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ ohere ntụgharị dị ka nbudata ebook, ịdenye aha maka webinar, ịdenye aha na ikpo okwu, wdg, mgbe ahụ ị kwesịrị ịgbakọ metric a n'ụzọ ndị a:
Gbakọọ ntụgharị ọ bụla iche iche site na iji naanị nnọkọ site na ibe ebe edepụtara onyinye ahụ.
Gwakọta ma gbakọọ mgbanwe niile site na iji nnọkọ niile maka weebụsaịtị.
Kedu ka nke Gị Si Akọwa?
Agbanyeghi na onu ogugu di iche na ulo oru ndi ozo, a ka nwere uzo isi echiputa nke gi.
Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya chọpụtara na nkezi ntụgharị ntụgharị n'ofe ụlọ ọrụ sitere na 2.35% na 5.31%.
- ụlọ ọrụ, Ọnụego mgbanwe weebụsaịtị
Site na ụdị ọdịnaya dị mma na ịkpọ oku iji rụọ ọrụ n'oge kwesịrị ekwesị, ndị na-ere ahịa nwere ike melite ọnụego ntụgharị n'ụzọ dị egwu na-enweghị nnukwu mbọ. Enwere nyiwe dị mfe iji otu nrụnye otu nzọụkwụ site na ntanetị dị ka TVgha weebụsaịtị.
IHE ngosi na-enye ndị ọrụ ohere ịdọta, tinye aka, ma jigide ndị ọbịa na ọdịnaya mmekọrịta, ha niile na-achịkọta isi ihe data dị oke mkpa. Nweta ihe omimi miri emi ma nwee ike ime ka azụmahịa gị nwee ike iji zipu ozi ziri ezi n'oge ziri ezi nye onye ziri ezi.
Tags: gbakọọ ọnụego mgbanwemgbanwe ntụgharịikeọdịnaya mmekọrịta
Dana bu onye ahia ahia ahia nke FORTVISION. Ọrụ ya gụnyere ịzụlite usoro ịzụ ahịa na ịchekwa ihe niile dijitalụ maka ikpo okwu na iwulite mmekọrịta na ndị na-eme ihe ike.